Munamato weropa raKristu. ? Kune vana uye kudzivirirwa
9 Kuverenga Min
Munamato weropa raKristu. Pakati pezvinhu zvese zvatiri muChechi yeKaturike, iro ropa raKristu ndiro rakanyanya kusimba uye ndosaka iripo munamato kune ropa raKristu.
Icho chinhu chichiripo nanhasi nekuti chichiri mumaoko akakuvadzwa aJesu Kristu akamuka. Kutenda kwedu kunochengeta mufananidzo waJesu uri mupenyu pamuchinjiko apa ropa rake rinoyerera nekuda kwerudo rwevanhu.
Chero chero chikumbiro chatinacho, tinotenda kuti iro ropa rakasimba raKristu rine simba rakaringana kutipa izvo zvatiri kukumbira.
Munamato unogona kuitwa chero kupi uye izvo zvinodiwa kuti uve nekutenda kuti chishamiso chakapihwa isu.
1 Munamato weropa raKristu une simba here?
1.1 Munamato weropa waKristu kuvana
1.2 Munamato ropa raKristu nekuda kwezakaoma nyaya
1.3 Munamato kune ropa raKristu kudzinga matambudziko
1.4 Dziviriro neropa raKristu
1.5 Munamato wezvese
Munamato weropa raKristu une simba here?
Minyengetero yose kuna Mwari ine simba.
Kana iwe ukanamata nekutenda unenge uine zvese zvauri kutsvaga.
Iva nekutenda uye tenda mumasimba aIshe wedu Jesu Kristu.
Munamato weropa waKristu kuvana
Ah baba vangu, ndauya kuzokumbira uye ndinokumbira kuti munzwe izwi rangu, ini ndinonetsekana, mureverere kuitira kuti mwanakomana wangu abve pane yakaipa kambani uye arege kuwira mukunwa zvinodhaka, doro, anojoinazve chikoro, ndinokumbira nemoyo wangu wese kuti simba reropa raJesu Kristu, Ishe muiitise munhu wakanaka zvakare.
Ishe, Baba vekudenga, geza mweya wemwanakomana wedu, mochenesa pane zvakaipa, ruvengo, chigumbu, kutya, kushungurudzika, kusurukirwa, kusuwa uye kurwadziwa ... kubudikidza neropa rako, tinokukumbira iwe kuti umushandure kuve munhu anoda vamwe , kufara, kudzikama, mutsa, pasina kutya, izvo zvinotapudza rudo, pasina kushungurudzika, ita mweya unochengetedza neropa rako rinokosha.
Mwari vane tsitsi, imi munoziva zvese, onai zvese, tipeiwo huchenjeri nekuti isu tiri vabereki uye tinoda kuve nani, ndibatsireiwo kuti ndinzwisise pamwe navo, isu tinoziva kuti mune makore mangani uye pavanenge vasingazorore uye / kana kumukira.
Haiwa, Ropa rakaropafadzwa raJesu Kristu rakateura Jesu, pane Mwanakomana wedu, iro rakaropafadzwa uye rakacheneswa ropa, kuti ripe iro simba.
Ini ndinobvunza kubva pakadzika kwandave.
Unogona kunamatira munamato weRopa raKristu kuvana vane mwana wako.
Vana nechinhu chakanaka kwazvo chingave chakaitika kwatiri. Vari michero yerudo rwedu uye tinovagamuchira munyika ino izere nemufaro nekutenda kuti zvese zvinovaitira muhupenyu.
Asi pane dzimwe nguva apo isu, sevabereki, tinorarama zviitiko zvisina kunaka uye ndipo apo Ropa rinogona Kristu Inova tariro yedu chete.
Kubvunza kune vana vedu chiitiko chakasimba cherudo chatinogona kuita.
Munamato ropa raKristu nekuda kwezakaoma nyaya
Ropa rakaropafadzwa raJesu Kristu! Rine ropa, remunhu uye nehumwari, ndishambidze, ndichenese, undiregerere, ndizadze nekuvapo kwako; Kuchenesa ropa rinopa simba, ndinokuda mune yako Eucharistic pamberi peAltari, ndinotenda musimba rako uye nehusimbe, ndinovimba iwe kuti uchandichengetedza kubva pane zvese zvakaipa uye ndinokukumbira kubva pakadzika kwekuvapo kwangu: pinda mweya wangu uye Ichenese, zadza moyo wangu uye urege.
Ropa rinokosha rakadeurwa pamuchinjiko uye nekushamisika mumoyo unoyera waJesu, ndinokuda uye ndinokupa murumbidzo wangu nerudo, uye ndinokutendai. Zvese zvakashata zvakatikomberedza.
Ah Jesu, uyo akandipa chipo chakakosha cheRopa rako, uye paKarivhari, nekushinga uye nerupo kuzvipira, wandichenesa pamadhara ese uye ndokudurura mutengo wekuregererwa kwangu; O Kristu Jesu, uyo paatari hupenyu hwangu, iwe unotaurisa hupenyu kwandiri, iwe uri sosi yezvose zvinozivikanwa, uye chipo chikuru kuna Mwari kuvana vake, uri muyedzo uye chipikirwa cherudo rusingaperi kwatiri.
Ndinoonga mikana yese yandakaponeswa uye nekudzivirirwa nesimba renyu uye nesimba, izvo zvinondisimbisa mukuvimbisa kwechokwadi kwekunzwisisa kwekutadza kwangu, kwekusagadzikana kwangu uye nekugona kwako kundidzivirira kubva pane zvakaipa zvinondikomberedza, mikombe yedhiabhori iyo inogara yakatipfekedza zvinopfuura simba redu uye zvatinogona.
Tinokutendai nekuve Ropa reRoyal rinosunungura hupenyu hwedu kubva murima uye kubva kuzviridzwa zvezvakaipa zvinowanzouya kuzotikuvadza.
Ropa raKristu rakamera panguva iyo paakapa hupenyu hwake nekuda kwevanhu uye mariri simba raMwari rakaiswa mukati kutipa isu zvishamiso zvatinoda.
Izvo zvinogona kuve zvikumbiro zvakaoma. Zvishamiso zvechokwadi uko chete kwesimba rinoshamisa rinogona kuita uye iro rinogona kuve iro Simba reRopa raKristu.
Munamato uyu unogona kuitirwa nemhuri kana shamwari, chinhu chakakosha kuziva kuti isu tinofanirwa kutenda, ndizvo zvinovimbisa kuti munamato unoshanda.
Munamato kune ropa raKristu kudzinga matambudziko
Matambudziko, kazhinji, gara mukati medu uye anokukuvadza. Isu tinorara husina husiku tichingofunga nezvedambudziko remamiriro atinawo uye izvi zvinotiunzira mhedzisiro yemuviri zvinogumbura.
Kukwanisa kudzinga matambudziko kunze kwedu, kubva kudzimba dzedu uye kunyangwe kunze kwehama dzepedyo chiito chinodiwa uye mune iri simba reRopa raKristu rinogona kutibatsira.
Namata nechikumbiro chakadai uye utende kuti mhinduro yaIshe iri munzira.
Dziviriro neropa raKristu
Ishe Jesu, muZita Renyu, uye nesimba reRopa Rako Rinokosha isu tinosimbisa munhu wese, chokwadi kana zviitiko zvinoshandiswa nemuvengi kuti atikuvadze.
Nesimba reRopa raJesu tinosimbisa masimba ese anoparadza mumhepo, pasi, mumvura, mumoto, pasi penyika, mumasimba asatani ezvisikwa, munzvimbo dzakadzika dzegehena, uye nyika yatichafamba nhasi.
Nesimba reRopa raJesu tinopwanya zvese kukanganiswa nezviito zvewakaipa.
Tinokumbira Jesu kuti atumire Mhandara Yakaropafadzwa kumisha yedu uye kunzvimbo dzekushandira dzinoperekedzwa naSaint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael nedare rake rese reSantos Angeles.
Nesimba reRopa raJesu tinosimbisa imba yedu, vese vanogara mairi (taura mumwe nemumwe wavo), vanhu vachatumirwa naIshe kwazviri, pamwe nechikafu nezvinhu zvavanotitumira nerupo kune vedu. tsigiro.
Nesimba reRopa raJesu isu tinosimbisa pasi, mikova, windows, zvinhu, madziro uye pasi, iwo mweya watinofema uye mukutenda tinoisa denderedzwa reRopa rake kutenderedza mhuri yedu yese.
Nesimba reRopa raJesu tinosimbisa nzvimbo dzatichazove nhasi, uye vanhu, makambani kana masangano atichazoita navo (zita rimwe nerimwe rawo).
Nesimba reRopa raJesu tinosimbisa zvinhu zvedu uye zveMweya basa, mabhizinesi emhuri yedu yese, uye mota, migwagwa, mweya, nzira uye chero nzira yekufambisa yatichashandisa.
NeRopa Rako rinokosha tinosimbisa zviitiko, pfungwa nemoyo yevagari vese uye vatungamiriri veNyika Yedu kuitira kuti Runyararo uye Mwoyo Wako vazopedzisira vatonga machiri.
Tinokutendai Ishe neropa renyu uye neHupenyu hwenyu, nekuti nekuda kwavo isu takaponeswa uye isu takachengetedzwa kubva kune zvakaipa zvese.
Munamato wekudzivirirwa neRopa raKristu wakasimba!
Tinogona kubvunza kuti iro ropa rakasimba raKristu rinotifukidza sejasi rekudzivirira rakatikomberedza kuti rakaipa rirege kutibata. Isu isu kana isu vacheche kana chero wemhuri nehama neshamwari.
Sezvazvaitika muna testamende itsva akasasa ropa pamakona edzimba sechiratidzo chedziviriro, saizvozvowo nokutenda isu tinoita nhasi kubvunza izvozvo Ropa raKristu rakabatanidzwa pamusuwo wedzimba dzedu uye nezvedu uye tidzivirire kubva pane zvakaipa zvese.
Mwari wangu uyai mundibatsire, Ishe, kurumidzai kundibatsira.
Ini ndinokumbira kuchengetedzwa kwakasimba kweRunokosha Kununura Ropa raKristu, Mambo wepasirese naMambo wemadzimambo.
Muzita raMwari Baba, muzita raMwari Mwanakomana uye muzita raMwari Mweya Mutsvene: Nesimba reRopa raJesu Kristu Ishe, ndinosimbisa nekudzivirira, kudzivirira nekusimbisa, kuziva kwangu, kusaziva, kusaziva, chikonzero changu, moyo wangu, manzwiro angu, pfungwa dzangu, muviri wangu, pfungwa dzangu, hunhu hwangu hwepamoyo uye wangu hwekunamata.
Zvese zvandiri, zvese zvandinazvo, zvese zvandinogona, zvese zvandinoziva uye zvese zvandinoda, zvakaiswa chisimbiso uye nekudzivirirwa nesimba reRopa raJesu Kristu Ishe. Mwari wangu, uyai mundibatsire, Ishe, kurumidzai kundibatsira.
Ini ndinoisa nguva yangu yapfuura, yazvino neyangu yemberi, ndinosimbisa zvandakaronga, zvinangwa, zviroto, kunyepa, zvese zvandinoita, zvese zvandinotanga, zvese zvandinofunga uye zvandinoita, zvakasungwa zvakanaka nekudzivirirwa nesimba reRopa raJesu Kristu. Ishe. Mwari wangu, uyai mundibatsire, Ishe, kurumidzai kundibatsira.
Ini ndinosimbisa munhu wangu, mhuri yangu, zvinhu zvangu, imba yangu, basa rangu, bhizinesi rangu, mhuri yangu yemuti, iyo yekutanga neyapera, zvese zvakasungwa nekuchengetedzwa, neRopa reRopa raJesu Kristu Ishe.
Ndinozvivanza muronda reVanga raJesu akakuvadzwa, ndinozvivanza mumoyo isingafadzi yeMhandara Yakaropafadzwa Maria, kuti hapana chinhu uye chero munhu anogona kundibata neuipi hwavo, ivo mashoko avo akaipa uye zviito, nezvishuvo zvavo zvakaipa kana nokunyengera kwavo, kuitira kuti pasave neanogona kundikuvadza muhupenyu hwangu hwepamoyo, mune hupfumi hwangu, muhutano hwangu, nehurombo hwavo hwakatumirwa, pamwe negodo ravo, nemeso avo akashata, makuhwa uye kuchera, kana nemashiripiti, zvipere, zvipere kana hexes.
Hupenyu hwangu hwese hwakavharwa, zvese zvakandikomberedza zvakavharwa, uye ini ……. Ini ndakachengetedzwa nekusingaperi neRopa Rinokosha Kwazvo reMununuri wedu.
Namata the munamato iro Ropa raKristu rezuva rega rega nekutenda kukuru.
Iyi itsika inotibatsira kuchengetedza kutenda mumhuri uye zvinosimudzira kubatana kwenyama uye pamweya.
Izvo zvinogona kuitwa mumangwanani kuratidza zuva idzva pamberi pekuvapo kwaMwari ane masimba ese. Unogona kuita mutsara wemazuva mapfumbamwe kana kuita munamato unongoerekana waita. Chinhu chakakosha kusarega kuzviita.
Kune mazera apo kutenda kunoratidzika kunge kuri nyore kwazvo kutyora uye mune idzo nguva apo minamato yemazuva ese inotanga kubereka michero. Kubvunza kuti kubudikidza neropa raKristu, zuva redu rikomborerwe rakakosha uye riine simba.
Kugara uchitenda kuti iro Ropa raKristu munamato rine simba.